सबैभन्दा लामो पुल संसारमा - डिजाइन विचार को एक चमत्कार छ
पुल - नदी र पोखरी, समुद्र र घाटिहरुमा को बैंकहरू जडान जो सबैभन्दा सुन्दर ईन्जिनियरिङ् संरचना, को छ। यो बिना विरलै आधुनिक रेल वा सडक गर्छ। धेरै पुल वा त्यो राज्य को प्राविधिक विचार को सुन कोष बनाउन शहर र अमेरिका को प्रतीक, छन्। धेरै डिजाइनर र इन्जिनियरहरूले यो आफ्नो सबै कौशल र प्रतिभा गरिरहेको, आफ्नो निर्माण एक "सबै भन्दा-भन्दा" सूची भयो सुनिश्चित गर्छन। सबैभन्दा प्रतिष्ठित एक को शीर्षक छ "सबैभन्दा लामो पुल संसारमा।"
मानव इतिहासको वर्ष धेरै हजारौं लागि, शीर्षक, अन्य ईन्जिनियरिङ् निर्माण गर्न एक देखि पारित बिल्डर्स नयाँ चुनौतीहरू राख्दै। वर्तमान मा दिन, सबैभन्दा लामो पुल चीन को जनता गणतन्त्र मा स्थित संसारमा। यो एक विशाल viaduct, को बेइजिङ-संघाई रेलवे बारेमा आधा संघाई र नानजिंग बीच मा स्थित छ।
संसारमा सबैभन्दा लामो पुल रेकर्ड समय मा बनाइएको थियो: 2008 मा राखे, यो 2011 मा एक Solemn समारोह मा उद्घाटन गरिएको थियो। पुल Yangcheng लेक, यो ठाउँमा नौ भन्दा अलि कम हजार मीटर छ को लम्बाइ को सुरम्य बैंकहरू जडान। पुल को कुल लम्बाइ र अचम्मको गरे - 164 भन्दा बढी हजार मीटर, र निर्माण नवीन समाधान को डिजाइनर यसको तार्किक निष्कर्षमा गर्न काम ल्याउन माग जो एक बरु जटिल भौगोलिक अवस्था, मा गरियो।
पनि चीन को क्षेत्र मा यो संसारमा सबैभन्दा लामो पुल, पानी मा स्थित छ। यो ईन्जिनियरिङ् Marvel किंगदाओ र Huangdao द्वीप शहर जडान। बिना अवरोध चिनियाँ परिचालन पनि सक्षम चार वर्ष यसको निर्माण मा खर्च, तर अब, विशेषज्ञहरु को आश्वासन, यो संसारमा सबैभन्दा लामो पुल कम्तिमा एक सय वर्षसम्म मान्य हुनेछ, मार्फत मिसिन हजारौं धेरै दसौं पारित हरेक दिन छ। को डिजाइनर खाता र उच्च भूकम्पीय क्षेत्रमा लिएका छन्: अप 8 अंक गर्न भूकम्प प्रतिरोध गर्ने Jiaozhou सक्षम मार्फत एक पुल।
त्यहाँ बारेमा र हाम्रो देश घमन्ड गर्न कुरा हो। 1.1 किलोमिटर - को Apec शिखर को पूर्वसन्ध्या मा खुला छ, को मुख्य भूमि र रूसी Primorye को आइल जडान पुल, छ दुवै सबैभन्दा लामो भएकालाई साथै केबल द्वारा समर्थित एक विशाल span (आफ्नो लम्बाइ 580 मिटर छ)। समुद्र स्तर माथि आफ्नो उचाइ 70 मिटर थियो भएकोले, त्यसपछि अन्तर्गत यो पनि सबै भन्दा ठूलो पारित गर्न सक्छ समुद्र liners।
तथापि, "सबैभन्दा लामो केबल-बसे, संसारमा पुल" को शीर्षक चीन मा फेरि स्थित संरचना पर्छ। यो एक निमन्त्रणा मात्र राजनैतिक नेताहरूसित एक Solemn समारोह मा मार्च 31, 2012 खोलिएको थियो, तर पनि चिरपरिचित सार्वजनिक तथ्याङ्कले, विश्वभरिबाट वैज्ञानिकहरू र बिल्डर्स। यो पुल को घाटी Aychzhay माथि स्थित छ, र यसको span लम्बाइ 72 मिटर रूसी टापुमा पुल को संवाददाता तथ्याङ्कले नाघ्यो।
चिनियाँ ईन्जिनियरहरु कि पुल को अन्त्य गर्न केन्द्र देखि काम राख्न नवीनतम प्रविधिहरू लागू गर्न पहिलो पटक यो सुविधा को निर्माण को समयमा तथ्यलाई विशेष ध्यान। यो नवीनता यो काम को सन्दर्भ एकदम सर्तहरू कम गर्न सम्भव, त्यसैले पुल नै पहिले मूल योजना भन्दा आधा एक वर्ष धारण थियो।
मूल्यवर्ग - मा मुद्रा मूल्य परिवर्तन
"कार्यकर्ता निर्णय सबै" के वाक्यांश गर्छ? यस वाक्यांश भने?
संसारमा सबै भन्दा ठूलो शहर। विवरण र विशेषताहरु
बर्नाउल को जनसंख्या: रोजगार को बल
आपूर्ति र माग को सिद्धान्त: प्रकृति, विशेषताहरु, आधारभूत अवधारणाहरु
दिन medic लागि उपहार: रोचक विकल्प
Sergey Ugriumov: अभिनेता को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
जंगली र घरमा कति प्रत्यक्ष चिनचिला?
शारीरिक शिक्षा, सेन्ट पिटर्सवर्गलाई Lesgaft संस्थान: वर्णन, विशेषता विभाग र समीक्षा
कला निर्देशक - मानिस ब्यान्ड